‘साग’मा खटिने स्वयंसेवकलाई प्रशिक्षण – Nepali Digital Newspaper
तेक्वान्दोको पुम्सेमा मधुलाई स्वर्ण
‘व्यायाम व्यवसायीको संघ, काठमाडौं’ गठन, अध्यक्षमा सुवेदी
आर्थिक अनियमितताकै लागि बक्सिङ सङ्घमा गैरकानुनी चलखेल
नेकाको केन्द्रीय खेलकुद विभाग विस्तार
‘साग’मा खटिने स्वयंसेवकलाई प्रशिक्षण
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 8 months ago November 19, 2019
नेपालमा हुने १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि गठित स्वयंसेवक परिचालन समितिले स्वयंसेवकका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरको छ । सागमा खटिने स्वयंसेवकको जिम्मेवारी बारे जानकारी गराउन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको समितिका सचिव प्रेम मल्लले जानकारी गराए ।
काठमाडौंमा हुने विभिन्न खेलका लागि ५ सय स्वयंसेवक परिचालन हुँदैछन् । उनीहरूलाई सुरक्षा, अतिथि सत्कार, सागमा सहभागी हुने विभिन्न महानुभावहरूले प्रयोग गर्ने एक्रिडेसन कार्ड, अनुशासन, नियम, कानूनलगायतका विषयमा जानकारी गराएको थियो । रमेश खनाल, डा. प्रकाश प्रधान, रुकेश तण्डुकार, चतुरानन्द राजवैद्य, दीपक राई र अर्जुन विकले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
तीनदिनसम्म चल्ने प्रशिक्षणको पहिलो दिन २ सय १५ जना सहभागी थिए । बाँकीलाई मंगलबार र बुधबार प्रशिक्षण दिइने छ । त्यस्तै पोखरा र जनकपुरमा हुने खेलका लागि खटिने स्वयंसेवकलाई पनि यस्तै तालिम दिइने सचिव मल्लले जनाएका छन् । पोखरामा मंसिर ५ र ६ तथा जनकपुरमा मंसिर ७ गते प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ ।
प्रशिक्षणको युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उदघाटन गरे ।
सोती घटनाको प्रतिवेदन बुझाइयो सभामुखलाई
प्रतिबन्धित नेकपाका पूर्वी कमाण्ड सैन्य विभाग प्रमुख पक्राउ
डा. रावललाई मिल्यो न्याय
मङ्ल, असार ३०, २०७७
कोरोना कहरकाबीच कवितावाचनसहित बेल्जियममा मनाइयो भानु जयन्ती